Xukuumadu laba arin oon is gayin bay jeeb isugu geysay by Abdi Mustafe
Xukuumadu laba arin oon is gayin bay jeeb isugu geysay by Abdi Mustafe 0 July 21, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 449
Xukuumadu laba arin oon is gayin bay jeeb isugu geysay by Abdi Mustafe Xukuumaduwaxay
leeday goa'ankii guurtidu waa distoori oo waa sax, hadana waxay leeyiin
arinka xisbiyada iyo xukuumadu wada saxeexeen isna waa xaq oo ma qaldana. Subxaan ... Waalida la sheegaa ma noocaasaa. Laba
arin oon is geyin bay xukuumadu jeeb isugu geysay. Madaxweynaha aamusay
lamaan yaabin oo markuu mucaaradka ahaaba cidi kamay qeylo badnayn oo wax baa iska bedelay. Waxaan la yaabay shicibkaSomaliland een dan ka lahayn ee qayilaya een is weydiinayn maxaa odeygii aamusiiyey ee saxaafada loogu diidaa in ay sua'allo weydiiso. iyo siday labadaa arin ee kala fogi ay labaduba sax u noqon karaan. Inta mudo kordhintan iyo huu haadan laga baxo madaxweynihii dalkan loo doortay waxa helay ma sahlana ee ha la yidhaahdo Silaanyo is cadee inaad xilka wadanka gudan karto iyo in aad meel lagugu xanaaneeyo tagto. Madaxtooyadu maaha Senior
home ama guri dadka waa weyn lagu daryeelo ee waa halkii dalka laga hagaayay. Waxaan ku soo oodayaa Somaliland madaxweynihii kala hagi lahaa
meesha kuma jiro ee ha la shaaciyo in xil gudasha la'ani madaxtooyada ka jirto. Madaxweyna aan shan sanadood shicibka la
hadal ayaa kolba dawo lagu soo toosiyaa oo dadka la tusaa. Madaxweynuhu
khudbad laba miridh ah ma sii deyn karo sua'al qudhana kama jawaabi karo. Hadaba maxaa la yeelayaa. Silaanyo dad baa magaciisa ku shaqeysta oon doonahayn in uu nasto. Isna awood uu kuwaa iskaga kiciyo malaha. Hadaba ha loo gurmado oo Somaliland iyo Silaanyo ba ha la bad-baadiyo.